အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အမြင်အာရုံ လှည့်စားမှုများ
20 Responses to “အမြင်အာရုံ လှည့်စားမှုများ”
လှည့်စားခံလိုက်ရတာကို နှစ်ခေါက်လောက် ထပ်ကြည့်သွားတယ်၊
၃ moving နှင့် ၄ Cafe Wall တို့ လေးခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်မိတယ်၊
အမှန်မြင်ဖို့ ခက်တယ်ဆိုတာ ပြောချင်တာဖြစ်ရမယ် အဟဲ...
ကြည့်ရင်းးးးးးးးးကြည့်ရင်းးးးးးးးနဲ့ နဂိုကမျက်လုံးမွဲလေတော့ အမလေးးးးးးး
မျက်လုံးထဲမှာ ပြာသွားတာပဲ..(အာရုံရဲ့ လှည့်စားမှုကို ကောင်းကောင်းခံလိုက်ရပြီလေ.)။
သရီးဒီ ပန်းပွင်ရှည်ရှည်လေးကိုတော့ မြင်အောင်ကြည့်သွားပါတယ်
ပုံလေးတွေအတွက် ကျေးဇူး ယောင်းယောင်း..။ အမြင်တွေ အဲလိုပဲ မှားတတ်တယ်ဆိုတော့ သတိထားရတာပေါ့နော်။
(ပထမနှစ်ကျောင်းသူဘ၀ကို လွမ်းသွားတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ အများကြီးကြည့်ပြီး စစ်ဆေးခဲ့ရလို့ )
ဒါကြောင့် တော်သွားတယ်၊ အမြင်မှန်သွားတယ်လို့ လည်း မရှိပါဘူး။ အသက်ကလေးကလည်း ရလာတော့ အမြင်တွေ မွဲလာလား သိဘူး။ အမြင်လွဲချင်တုန်းပဲး)))))
မြင်ပါတယ် အားလုံးကို မြင်တာ
အမြင်မှန် ရသွားပေမဲ့ ခု
ဟုတ်လား ? အဲ့မှာ ရလား
မကြေနပ်ဘူးဗျာ။တြိဂံကကျွန်တော်ဆို ၈ ခုတောင်တွေ့တာ။၁ ခုထဲတဲ့။မယုံရင်ပြန်ကြည့် ၈ ခုရှိတယ်။
၃နား ၃ ထောင့်ရှိရင်တြိဂံပဲလေဗျာ။အဖြူ ဒါမှမဟုတ်အနက်တစ်ခုခုပဲကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တြီဂံတစ်ခုမှမရှိဘူး။
ဟုတ်ပါ့ မမရေး လည့်စားခံလိုက်ရတယ်းD
ထူးဆန်းလေးတွေနော် ဓါတ်ပုံမှာလှုပ်သလိုခံစားရတာကိုတော့ သဘောကျမိတယ်။
Playing and thinking together :D
မချောရေ ...... မူးတွားပြီ..... မျက်လုံးတွေထဲမှာ ပြာပြာတွေပဲမြင်ရတောတယ်.....
လှည့်စားခံရတာထက် မနေ့က ဒီပို့စ် ၀င်ဖတ်တော့ ဆိုက်လေး ပျက်သွားပြီးလို့ အချက်ပြနေလို့
စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ...ခုမှ သက်ပြင်းမောကြီး ကျသွားတော့တယ်..
ဦးနှောက်ရှိတဲ့လူတွေလဲ လှည့်စားခံရတယ်တဲ့လားး အဲ့စကားလေး ကြိုက်သွားပြီ ...
နှင်းဆီပန်းလေးမြင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူများတွေအတွက် ထားခဲ့တယ် မယူသွားတော့ဘူးနော်း)
ဘလော့အသစ်တွေ့လို့ အပြေးအလွားကြည့်လိုက်တာ လူကိုမူးနောက်တွားဒယ်......
မရေ....(3)moving Image နဲ့ လည်နေတဲ့ ဖရဲသီးလေးတွေ တော်တော်ကို သဘောကျတယ်။
ရှာရှာဖွေဖွေပါပဲ မရေ။ :)
နှင်းဆီပန်း ရှာရင်းနဲ့ မူးပြီးပြန်သွားတယ်။ မူးမူးနဲ့ တော့ ထင်နေခဲ့တာက
လက်ထဲမှာပဲ ပန်းက ပါလာသလိုလို။ ဟဲဟဲ။ :)
လူကို မတောက်ဖဲ မူးအောင်လုပ်နေရယ်
လူဇိုးးးးး တွားးးးး ကောက်တယ် မခေါ်ဘူး
မချောရေ... အားလုံး အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ.. .. ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက The moving image illusion ပါ.. ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုဟာတွေ အရမ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ.. နောင်များကြုံရင်လည်း မျှဝေပေးပါဦး.. 3D ပုံကတော့ နှင်းဆီတစ်ပွင့်လိုချင်လို့ အော ကြည့်လိုက်တာ.. မျက်လုံး တစ်လုံးတောင် အခြမ်းကပ်သွားပြီ.. မနဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ပေး.. :P
အခုလောလောဆယ်ပုံတွေအားလုံးမပေါ်သေးတော့ ပေါ်သလောက်ပဲကြည့်သွားခဲ့တယ်... ဒါနဲ့ ပုံနံပါတ် ၆ မှာ အဖြူရောင်ကို ဘယ်နားမှာချန်ခဲ့တာပါလိမ့်.. ၃ ရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့...
စမ်းကြည့် တယ်မလွယ်ဘူး ။